ज्योति लाइफले घोषणा गर्‍यो लाभांश घोषणा (कति ?) – OnlinePahar
२८ माघ २०७७, बुधबार ११:४९ Basanta Khanal	0 Comments	Bonus share
काठमाडौं । ज्योति लाइफ इन्स्योरेन्स कम्पनीले लाभांश घोषणा गरेको छ । कात्तिक १४ गते बसेको बैंक सञ्चालक समितिको बैठकले आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को सञ्चित मुनाफाबाट सेयरधनीलाई वितरण गर्ने लाभांश प्रस्ताव गरेको हो । कम्पनीले हालको चु्त्ता पुँजी २ अर्ब २० करोडको १०.९३ प्रतिशत बोनस सेयर र लाभांशमा लाग्ने कर समेत गरि ५.५२६३ प्रतिशत नगद लाभांश गरी कुल १०.५२६३ प्रतिशत लाभांश वितरण गर्ने प्रस्ताव गरेको छ । कम्पनीको प्रस्तावित लाभांश बिमा समितिको स्वीकृति र आगामी वार्षिक साधारणसभाबाट पारित भएपछि सेयरधनीमा वितरण हुनेछ ।
साताको दोस्रो दिन सोमबार नेपाली बजारमा सुनको मूल्य सामान्य बढेको छ । प्रति ताेलामा १०० रुपैयाँले बढी ९१ हजार ८०० रुपैयाँमा काराेबार भइरहेकाे नेपाल सुनचाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएकाे छ । आइतबार प्रति तोला ९१ हजार ७०० रुपैयाँमा काराेबार भएकाे थियाे । तेजाबी सुन प्रतितोला ९१ हजार १०० रुपैयाँ कायम भएको छ । सुनकाे मूल्यसँगै चाँदीको मूल्य पनि बढेको छ । प्रति ताेलामा ५ रुपैयाँले बढी एक हजार २४५ रुपैयाँमा काराेबार भइरहेकाे छ । आइतबार एक हजार २४० रुपैयाँमा काराेबार भएकाे थियाे ।
← पाथिभरा माताले हामीसबैको रक्षा गरुन, १५ कार्तिक २०७८ सोमवारको राशिफल पढौं
पाथिभरा माताले हामीसबैको रक्षा गरुन, १६ कार्तिक २०७८ मंगलवारको राशिफल पढौं →
कोभिड नेपाल: २६ सांसद सङ्क्रमित, प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने संसद् अधिवेशन के हुन्छ?
२८ माघ २०७७, बुधबार १९:५० admin	0